China na-eduga oge opupu ihe ubi na ụfụfụ azụ | Rayson
Otu onye na-eweta ọrụ nkwụsị nkwụsị maka ụdị ngwaahịa matrasses China niile.
Matraasi na-aga n'ihu na-aga n'ihu
Akwa mmiri mmiri
Akwa na-acha uhie uhie
Akwa nkwari akụ
3 Star Hotel Matra
4 Matra State Hotel
5 Mata Start Hotel
Usoro akwa akwa
Ụlọ nkwari akụ
Oge ohiri isi
Ebe nchekwa Forem
Matraasi na igbe
Ọrụ ODM & OEM
Nlele ụlọ ọrụ
]Ha nile na-arụpụtara dị ka agbasosi mba ụkpụrụ. Anyị na ngwaahịa natara amara ma anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa.
Ha na-ugbu a n'ọtụtụ ebe exporting na 200 mba.
]Nso Of Premium Products
Na 30 afọ na-enweta mmiri n'ichepụta
80000 square mita
80,000 square mita factory ebe
1600 square mita
1600 square mita China matarasị ngosi ulo
More karịa 700 ọrụ
Monthly mmepụta ihe karịrị 30,000 iberibe matarasị
100 nde dollar
Kwa Afọ mmepụta uru nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe karịrị 100 nde dollar
Rayson nwere ike hotel spring matarasị, orthopedic bed matarasị, n'akpa uwe spring matarasị, bonnell spring matarasị, na-aga n'ihu spring matarasị, ebe nchekwa ụfụfụ matarasị, latex matarasị na ma ewepụghị agụụ abịakọrọ ụzọ ma ọ bụ mpịakọta juru n'ọnụ ụzọ. Anyị nwere ihe karịrị 100 ẹdude ụdị n'ihi nhọrọ.
]Ndina Base Series
]ohiri Isi Series
ODM& OEM ọrụ
01 - Ndị ahịa na-ebuga echiche nke ngwaahịa na ihe achọrọ
02 - Nyocha na imewe
03 - Nyocha ahịa
04 - Kwenye azịza ya na ndị ahịa
05 - Ịnye ọnụ ahịa
06 - Ihe atụ
07 - Usoro nnwale/ọnụ ọgụgụ
08 - Nzaghachi ahịa
09 - Nhazi ụdị ngwaahịa
10 - Hazie maka mmepụta
11 - mbupu
Ọ bụrụ na ịgakwuru ngwaahịa anyị, ị ga-enweta mbelata ego na-atụghị anya ya, biko kpọtụrụ anyị ozugbo.
Emepụtara ha niile dịka ụkpụrụ mba ụwa siri sie ike. Ngwaahịa anyị enwetala ihu ọma site n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. Ha na-ebupụ ugbu a n'ọtụtụ ebe na mba 200.
A na-ebupụ ihe karịrị 90% ngwaahịa matraasi anyị na Europe, America, Australia na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Anyị na-ebunye ihe ndị dị na akwa akwa na Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland na ụdị matraasi mba ụwa ndị ọzọ ama ama.
]9inch Sweet Classic Spring Mattress
]10Inch Plush Memory Foam Spring Hybrid Mattress
]Ime ụlọ matraasi jel ebe nchekwa ụfụfụ n'akpa uwe mmiri matraasi
]Ohiri isi dị elu nke dị ọnụ ala na katọn
]Matraasi ebe obibi maka ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọrụ
]Ohiri isi siri ike dị ọkara n'elu akwa akwa mmiri mmiri bonnelll
]Ụfụ ebe nchekwa nke Queen na-atụgharị matraasi na igbe 8 inch
]White 8 Inches Queen Size Hotel na Akụrụngwa ụlọ na akwa akwa
Foshan Rayson Non Woven Co., Ltd. bụ njikọ aka nke Sino-US, hiwere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tech Mpaghara, ma ọ dị nso na ụlọ ọrụ ama ama dị ka Volkswagen, Honda Auto na Chimei Innolux. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ihe dị ka nkeji 40 site na ụgbọ ala si Guangzhou Baiyun International Airport na Canton Fair Exhibition Hall.
Anyị isi ụlọ ọrụ "JINGXIN" malitere ime ka mmiri waya maka matraasi innerspring mmepụta na 1989, ruo ugbu a, Rayson bụghị naanị a China matraasi factory (30000pcs / ọnwa), kamakwa otu n'ime nnukwu matraasi innerspring (60,000pcs / ọnwa). ) na PP ndị na-emepụta ákwà na-adịghị ekpuchi (1800ton / ọnwa) na China nwere ihe karịrị ndị ọrụ 700.
A na-ebupụ ihe karịrị 90% nke ngwaahịa anyị na Europe, America, Australia na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Anyị na-ebunye ihe ndị dị na akwa akwa na Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland na ụdị matraasi mba ụwa ndị ọzọ ama ama. Rayson nwere ike mepụta akwa akwa akwa akwa, akwa akwa mmiri, akwa akwa bonnell, matraasi mmiri na-aga n'ihu, matraasi ebe nchekwa ụfụfụ, akwa nchekwa ụfụfụ ngwakọ na akwa latex wdg.
]ỌZỌ BAARA ANYỊ
]Ihe gbasara (5)
]Ihe gbasara (2)
]Ihe gbasara (3)
]Ihe gbasara (4)
Rayson China matraasi ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ụdị ọ bụla nke na-elekọta mmadụ, ị nwere ike ịhụ anyị kasị emelitere ozi ebe a!
]COC- Asambodo Nkwekọrịta maka Ngwaahịa Matraasi
]Rayson nwere ike ịnye akwụkwọ nkwado COC maka ndị ahịa nọ n'etiti America, South America na Africa.
]Ụdị akwa akwa ọhụrụ 2021
]Ụlọ ọrụ Rayson Mattress ewepụtala ihe dị ka ụdị akwa akwa ọhụrụ 20 n'afọ a, pịa ozi anyị ka ịmatakwu!
]A na-eme nkuzi nkuzi matraasi kwa oge ebe a na Rayson
]Rayson ga-enyere aka ịzụ ndị nnọchi anya ahịa ọzụzụ kwa oge iji nye ndị ahịa ọrụ ndị ahịa ka mma.
]Kedu ka esi eme ka ogologo ndụ nke matraasi gị dị ogologo?
]Kedu ka esi eme ka ogologo ndụ nke matraasi gị dịkwuo elu? Ntuziaka nlekọta matraasi.
Anyị raara onwe anyị nye ịkwalite ogo ihi ụra gị, ọ ga-amasịkwa gị ịbụ onye ndụmọdụ ụra gị, site n'inye ndị ahịa akwa matraasi ka mma, anyị nwere olileanya na onye ọ bụla nwere ike nweta ndụ ka mma!
WHATSAPP: + 86-13536639410 / E-mail:info@raysonchina.com / Onye kọntaktị: Wendy Rong
]Otu anyị si eme ya zute ma kọwaa Global
]Ihe mbụ anyị na-eme bụ izute ndị ahịa anyị ma na-ekwurịta ihe mgbaru ọsọ ha na ọrụ n'ọdịnihu.
N'oge nzukọ a, nweere onwe gị ikwupụta echiche gị ma jụọ ọtụtụ ajụjụ.
Matraasi n'ime igbe
ODM& Ọrụ OEM
Usoro ihe ndina
Usoro ohiri isi
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị.
Tinye: Hongxing Village Industrial Park, Guanyao, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China